Waa maxay maaliyaddu: fikrad, astaamo iyo inbadan | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Dhaqaalaha waa wax aan si fiican u naqaan. Looma baahna in la is-maamulo, la yeesho SME ama shirkad weyn si loo fahmo in fikradani ay jirto maalin-ka-maalin kasta oo qof iyo / ama qoys kasta. Oo ma maanta ayaa maaraynta waxaad kasbatay iyo waxaad ku bixisayba waa lama huraan, gaar ahaan inaad nolol maalmeedkooda daboosho.
Laakiin, Waa maxay maaliyaddu? Ma la mid tahay xisaabinta? Maaliyad noocee ah ayaa jirta? Shakigaas oo dhan, iyo in yar oo kale, waa waxa aan uga hadli doonno maqaalkan maanta.
1 Waa maxay dhaqaalaha
1.1 Farqiga u dhexeeya dhaqaalaha iyo dhaqaalaha
1.2 Maaliyadda vs xisaabinta
3 Maxaa loogu talagalay dhaqaalaha?
4 Noocyada maaliyadda
4.1 Dhaqaalaha shirkadaha
4.2 Dhaqaalaha gaarka ah
4.4 Caalami ah
Sida laga soo xigtay RAE, dhaqaalaha waxaa loo fahmay sida Waajibaadka qof uu qaadanayo inuu ka jawaabo waajibaadka qof kale. Si kastaba ha noqotee, macnayaasha kale ee ay bixiso, waxaan ka leenahay tan "Qulqulka, alaabada", taas oo ah sida aan caadiyan u naqaan. Xaqiiq ahaan, dhaqaalaha waxaa lagu qeexi karaa qayb ka mid ah dhaqaalaha oo mas'uul ka ah barashada lacagta iyo suuqyada raasumaalka, iyo sidoo kale hay'adaha ka dhex shaqeeya, ujeedkeeduna yahay in la sameeyo siyaasado lagu soo jiito kheyraadka. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa sayniska daraaseeya sida loo abuuro, loo horumariyo loona maareeyo lacagta aad haysato.
Kaliya diiradda kama saareyso siyaabaha lacag lagu helo (dakhliga, mushaarka, iwm.) Laakiin sidoo kale waxay daryeeshaa keydinta iyo maalgashiga, iyadoo soo jeedineysa qorshayaal wax walba looga dhigayo mid faa'iido leh.
Farqiga u dhexeeya dhaqaalaha iyo dhaqaalaha
Taasi waxay tiri, way cadahay in maaliyaddu ay tahay shay iyo dhaqaale kale. Waxaan dhihi karnaa in maaliyaddu ay qayb yar ka tahay wax kasta oo dhaqaalaha ku jira.
Iyadoo dhaqaalaha wuxuu leeyahay qaab ballaaran oo loo maro culuunta kala duwan, maxaa yeelay waxay diiradda saareysaa aragtida sida loogu qanco baahida dadka iyadoo loo marayo wax soo saar dhaqaale; maaliyaddu waxay leedahay uun qaab lacag-urursi badan.
Maaliyadda vs xisaabinta
Hadda, waxaa jira dad badan oo isku qalda laba fikradood oo ah in tixgelinta loo qaadan karo inay isku mid tahay, laakiin dhab ahaantii sidaas maahan. Waxaan ka hadlaynaa dhaqaalaha iyo xisaabaadka. Maxaad u malaynaysaa inay isku mid yihiin hadda?
Hagaag, runtu waxay tahay inaysan sidaas ahayn. Waa laba fikradood oo isku mid ah, laakiin isla markaa aad u kala duwan. Si aan fikrad kaa siino, waxaan haynaa:
Xisaabaadka: Xisaabinta ayaa ah anshax ka kooban xeerarka iyo habraacyada amarka, falanqaynta iyo diiwaangelinta howlaha dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed. Ama, haddii si kale loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa habka loo ururiyo, loo falanqeeyo loona amro hawlgallada maaliyadeed iyo kuwa dhaqaale.
Maaliyadda: Dhaqaalaha laftiisa ayaa ka muhiimsan xisaabaadka, maxaa yeelay waxay ku xiran tahay anshax marintaas go'aan ka gaarista lacagta, hadey ahaan laheyd maalgashi, keydin, qarash gareyn ama raadinta qorshooyin lagu helo maalgelin dheeraad ah.
Si kale haddii loo dhigo, xisaabintu waa qeyb ka mid ah maaliyadda, maadaama la'aanteed, maaliyadda la fulin kari waayey.
Marka aad si cad u qeexdo fikradda, iyo gaar ahaan farqiga u dhexeeya maaliyadda, dhaqaalaha iyo xisaabinta, tillaabada xigta waa in la ogaado waxa lagu garto maaliyadda si loo xoojiyo aqoontaada. Xaaladdan, waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha soo socda:
Hadafkaagu waa inaad maamusho lacagta. Laakiin sidoo kale alaabada raasumaalka ah. Taasi waa, ma aha oo kaliya wax ka qabashada maareynta lacagta aad haysato, laakiin sidoo kale waxay ku saabsan tahay maaraynta lacagta aad haysato, laakiin sidoo kale kaydinta, maalgashiga, amaahda ... Labada waxa aad haysato iyo waxa ay tahay in laguu tixgeliyo xagga dhaqaalaha.
Waxay qabataa fikradaha gaarka ah. Waxaan ka hadleynaa eraybixinta dhaqaalaha iyo dhaqaalaha: faa'iidooyinka, dulsaarka dulsaarka, halista, kharashyada maalgashiga ...
Ka caawi hagaajinta maaraynta lacagta. Adoo sifiican u garanaya waxaad haysato, waxa lagugu leeyahay iyo halka aad rabto inaad aado, go'aamada ay gaaraan dhaqaalahu waxay raadinayaan in lagu gaaro himiladaas oo, iyada, lagu hagaajiyo xaalada dhaqaale. Taasi waa sababta ay muhiim ugu yihiin ganacsiyada iyo sidoo kale qoysaska iyo shakhsiyaadka.
Waxaa caawiya maadooyin kale. Xaqiiqdii, waxaad horeyba u aragtay in xisaabintu ay xiriir dhow la leedahay dhaqaalaha, laakiin sidoo kale dhaqaalaha, tirakoobka, itimaalka ...
Maxaa loogu talagalay dhaqaalaha?
Way cadahay in dhaqaaluhu ay joogaan maalinteenna maanta. Waa hab dadka iyo shirkadaha looga dhigayo inay arkaan waxa ay haystaan, waxa ay ku leeyihiin iyo waxa ay ku qaban karaan manfacyadooda ama deyntooda, habkaas oo ay ku doonayaan inay ku helaan natiijada ugu fiican, iyo ilaha ugu habboon, sidaa darteed in dhaqaalaha (ha ahaado qof, qoys ama shirkad) ay qaadato wadadiisa.
Waayo, qashin, maalgelin xun, ama go'aanno dhaqaale oo liita ayaa saameyn xun ku yeelan kara (illaa heer aad u socoto halaag), taas ayaa ah sababta aanad tan ugaga tagi karin ikhtiyaarkaaga xorta ah, laakiin aad leedahay madax inaadan ku bixin wax ka badan waxaad haysato, ama aadan uga tagin keydinta dhaqdhaqaaq la'aan maxaa yeelay waxay ku siin karaan faa'iidooyin badan.
Ugu dambeyntiina, waa inaad ogaataa in dhaqaalaha loo qaybin karo afar kooxood oo ballaadhan.
Iyagu waa kuwa diiradda saara shirkadaha. Taasi waa, waxa ay raadinayaan waa bartaan sida loo helo, loo maareeyo loona isticmaalo ilaha dhaqaale ee shirkadeed. Tusaale ahaan, waxay go aansan karaan mashaariicda ama alaabada ay maalgashi ku sameynayaan, sida loo qeybsado macaashka, ama sida loo helo ilo dhaqaale oo ay ku maamusho shirkadda.
Dhaqaalaha gaarka ah
Kuwani waa kuwa ugu fiican ee la yaqaan, tan iyo markii aan ku dabaqno maalin kasta shaqsi ahaan iyo qoys ahaanba. Waxaan tixraaceynaa kuwa baranaya sida loo helo ilo iyo sida loo maareeyo. Kaliya kuma koobnaan doonto arrinta dhaqaalaha, laakiin sidoo kale shaqada iyo tababarka, maadaama ay kuxirantahay xirfadda ama xirfadda, iyo sidoo kale shaqada uu qofku haysto, go'aan qaadashada way ka duwanaan doontaa, oo ay kujirto maalgashi iyo keyd.
Maaliyada guud waxaa loola jeedaa gorfaynta iyo maaraynta dhammaan ilaha dhaqaalaha iyo dhaqaalaha ee hay'adaha dawladu leeyihiin.
Taasi waa, sida loo helo ilaha iyada oo loo marayo canshuuraha, sida maalgashiga mashaariicda; sida dib loogu qeybiyo kheyraadka iyo waliba faa iidooyinka, iwm.
Kuwani waxay tixraacayaan macaamilada caalamiga ah, inta badan waxaa diirada lagu saaray shirkadaha ka shaqeeya dhoofinta ama soo dejinta, ama wax iibsiga iyo iibinta dibedda.
Waa inay aad uga feejignaadaan isbeddelka sarrifka lacagaha, macaashka, deynta waddan, iyo sidoo kale khataraha ka dhalan kara macaamilkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Waa maxay dhaqaalaha
Telefoonnada guryaha aan xarka lahayn weli miyaa la iibinayaa? Isbedelada suuqa
Isdiiwaangalinta Mucaaradka. Laga bilaabo 23/11 ilaa 2/12 ee 2020